Fisorohana kolikoly :: Hotsingolohan’ny Bianco fatratra ireo tsenan-draharaham-panjakana • AoRaha
Fisorohana kolikoly Hotsingolohan’ny Bianco fatratra ireo tsenan-draharaham-panjakana
Hiditra an-tsehatra amin’ny fanaraha-maso hentitra amin’ny fanomezana an’ireo tsenan’asam-panjakana ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco). « Hanara-maso akaiky ny fitantanana an’ireo tsenan’asam-panjakana izahay mba hisorohana ny kolikoly. Hojerena avokoa ireo hirika rehetra mety hisiana kolikoly amin’izany », hoy ny tale jeneralin’ny Bianco, Andrianirina Laza Eric Donat, omaly.
Nohazavain’ity farany fa misy foana ireny tsenan’asam-panjakana ireny, ka raha sanatria misy ny fihoaram-pefy amina fanomezana tombondahiny orinasa iray na koa fanodinkodinana ny teti-bola hampiasaina amin’izany, dia hanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Bianco. « Sampandraharaha sy rantsa-mangaika maro no hifarimbona aminay amin’ny fanaraha-maso an’izany », hoy ihany ny tale jeneralin’ny Bianco.
Manaporofo an’izao fidirana an-tsehatry ny Bianco amin’ny asa fisorohana ny kolikoly izao ny fampiofanana an’ireo mpiasa eo anivon’ny sampandraharaha mitantana ny seranam-tsambon’i Toamasina (Spat). Harahan’ny Bianco maso akaiky ny fomba hoentin’ny Spat manome ny tsenan’asa ho an’ireo orinasa hanatanteraka ny fanitarana ny seranam-tsambo any an-toerana.
Vola mitentina 639 tapitrisa dolara no hampiasaina amin’ny fanitarana an’ity seranam-tsambo ity, ka haharitra fito taona ny fanatontosana ny asa. “Ny fitondram-panjakana japoney amin’ny alalan’ny orinasa Jica no tompon’ny famatsiam-bola. Fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana malagasy no hahafahan’izy ireo nanome an’io vola io. Efa mandeha ny sivana amin’ireo orinasa tokony hisitraka ny fahazoana ny asa”, hoy ny tale jeneralin’ny Spat, Christian Eddy Avelin.
Nohamafisin’ny tale jeneralin’ny Bianco indray fa “raha misy ny trangana kiantranoantrano amin’izany, ka mety hisintona ny famatsiam-bolany ny Jica”. “Ny ankoatra an’izay dia raharahana kolikoly. Ny fitsarana no manapa-kevitra farany”, araka ny fanampim-panazavana noentin’ny tale jeneralin’ity Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly ity.